नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी बिल तिर्नेको सूचीमा कुलमान, कति तिरे ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी बिल तिर्नेको सूचीमा कुलमान, कति तिरे ?
काठमाडौं । टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी बिल तिर्ने ग्राहकको नाम सार्वजनिक गरेको छ। टेलिकको विभिन्न सेवाहरूमा सबैभन्दा बढी बिल तिर्ने १२ सेवाग्राहीलाई टेलिकमको १४ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्मान गरिएको हो। यस वर्ष जिएसएम पोष्टपेड व्यक्तिगततर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेका छन्।
उनले एक वर्षमा नेपाल टेलिकमलाई १ लाख ९७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँको बिल भुक्तानी गरेका हुन्। जिएसएम पोष्पेड संस्थागत तर्फ सुर्य नेपाल प्रालिले विल भुक्तानी गरेको छ। सुर्य नेपालले प्रालिले यो वर्ष ९ लाख ४६ हजार १ सय ८० रुपैयाँ विल भुक्तानी गरेको छ।
जिएसएम प्रिपिएडतर्फ पत्रकार पुष्प दुलाललले सबैभन्दा बढी रकम तिरेका छन्। दुलालले ६४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँको विल भुक्तानी गरेका छन्। सिडिएमए पोष्टपेडतर्फ नवज्योति इन्पेक्सले सबैभन्दा बढी १८ हजार ६ सय रुपैयाँ र व्यक्तिगततर्फ भीमबहादुर लावती ३७ हजार २ सय रुपैयाँ बिल भुक्तानी गरेका छन्। वाइम्याक्स सेवामा संस्थागतमा सबैभन्दा बिल भुक्तानी गर्नेमा सिने हाइड्रो प्रालि रहेको छ। उसले ८८ हजार रुपैयाँको बिल भुक्तानी गरेको छ।
हत्या हुने आशंका पछि ‘गोरे’को आत्मसमर्पण ! काठमाडौं आएको सूचना परिवारवाटै (पत्रसहित)
काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्ड मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरे आत्मसमर्पण गर्न […]
यी हुन् १० वर्षीया श्रेयाको हत्या गर्ने छिमेकी,यस्तो छ घटना विवरण
काठमाडौं । प्रयासको प्रतिकार गर्दा १० वर्षीया बालिका श्रेया विकको हत्या भएको खुलेको छ । घटनामा संलग्न भएको […]
बाहिरिएका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन समता रणनीति तयार
मङ्सिर २९ ।काठमाडौँ,शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने मुख्य ध्येयले […]
ब्रेक फेल भएर जहरसिंहपौवामा जन्तीबस यसरी पल्टियो
काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाहुनेपाटीबाट जन्ती लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको ना ४ ख ९२०१ नम्बरको यात्रुबस […]
सम्वाद समितिको बैठक जारी
साउन २४। काठमाडौँ, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठक जारी सिंहदरवारमा बसिरहेको छ । दलहरूबीच […]